Yintoni i-visual metonymy? | Abadali be-Intanethi
Yintoni i-visual metonymy?
Iris Gamen | | Idizayini yeMifanekiso
Kwihlabathi loyilo, imifanekiso yeyona nto ibalulekileyo yonxibelelwano olubonakalayo kwiingcali, kunye nabo balawulayo ukuthumela umyalezo kuluntu ngabo.
Ukuze lo myalezo ungene eluntwini, i imifanekiso kufuneka ibe ukucenga, kwaye ngoko nangoko uthumele loo myalezo.
Iingcali zoyilo zihlala zisebenzisa rhetoric ebonakalayo, ekubeni ingumthombo oxabisekileyo xa kufikelelwa ekudluliseni ingcamango ngendlela enamandla.
Kweli nqaku, siza kuthetha ikakhulu malunga i-metonymy ebonakalayo kuyilo lwegraphic kwaye siza kudwelisa isafobe esithile esikwasetyenziswa kuyilo.
1 Yintoni i-rhetoric ebonakalayo?
2 I-Visual metonymy kuyilo. Yintoni?
3 Ezinye izafobe ezibalulekileyo kuyilo
3.1 isikweko esibonakalayo
3.2 isifaniso esibonakalayo
3.3 Ibaxo elibonakalayo
3.4 isifaniso esibonakalayo
Yintoni i-rhetoric ebonakalayo?
Ukuqonda ngendlela elula ukuba yintoni i-rhetoric ebonakalayo, kunjalo indlela izinto esizibonayo ezisikhuthaza ngayo. Kodwa ayisiyiyo kuphela ingcamango emva kwemifanekiso, kodwa indlela ubani ayitolika ngayo, kwaye inika intsingiselo kolo lwazi.
Iqala ngento esiyibonayo ngamehlo ethu, ize iphele ngengcaciso esiyinikelayo; Ingaba u indlela phakathi kwamehlo ethu kunye nengqondo. Ngamafutshane, bubuchule bokusebenzisa imifanekiso ukuhambisa umyalezo eluntwini.
Into ebalulekileyo ukuqonda i-rhetoric ebonakalayo kukuqala ngohlalutyo lwezinto ezicacileyo, Chonga umyalezo ophambili womfanekiso esiwubonayo. Kancinci kancinci, siza kuhlalutya indlela eyenziwe ngayo ngokubanzi size sifumane iimpendulo kwimibuzo enjengale, Yiyiphi eyona nto ibalaseleyo ngomfanekiso ophambi kwethu?
Sakuba sizazi iziqalelo ngabanye, thina uhlalutya i-psychology yombala, ukusetyenziswa kwe-typography kunye nokwakheka kwayo.
Kubonakala kuntsonkothile, kodwa ngokuchaseneyo, eneneni ekubeni siphume ngomnyango wendlu i-rhetoric ebonakalayo ikhona, umzekelo kuyilo lwezakhiwo. Kwaye thina, ngokwemfundo yethu, uluhlu lweminyaka, amava, njl. yona siyagweba. Kwaye kukuba, kufuneka sikhumbule ukuba umfanekiso omnye unokuthetha izinto ezahlukeneyo kumntu omnye okanye komnye, mhlawumbi ngenxa yenkcubeko, imfundo, uluntu, njl.
I-Visual metonymy kuyilo. Yintoni?
Siyaqonda i imetonymy njengegama okanye ibinzana esilisebenzisa endaweni yelinye elinxulumene nalo. I-Metonymy inxulunyaniswe ngokusondeleyo nesinye isafobe, isafobe.
Izithonjana zi amanani asetyenziswa kumhla wethu kuyo nayiphi na incoko esinayo, nakwihlabathi loncwadi.
Kwihlabathi loyilo lwegraphic, imetonymy isetyenziswa xa kukho ukudluliselwa kwentsingiselo ngendlela yonxulumano, oko kukuthi, buyisela isimboli ngesimboli, i-abstract kunye nekhonkrithi. Kukuthiya into, ingcamango okanye into ngegama lenye enobudlelwane nayo, enokuba lunxulumano lwesizathu okanye ukuxhomekeka.
I-metonymy ebonakalayo kwinkalo yobugcisa iqondwa njenge umfanekiso womfuziselo osetyenziselwa ukwenza intsingiselo yokoqobo. Uluntu ludala unxibelelwano phakathi komfanekiso ojongweyo kunye nentsingiselo evela ezingqondweni zabo.
Okulandelayo siza kubona uluhlu lweemetonymies ezibonakalayo ezenziwe ngeempawu ezahlukeneyo. Apho sinokubona ukuba njani into eyinyani kunye nento ekhankanyiweyo inobudlelwane besizathu nesiphumo ebesithetha ngayo ngaphambili. Kwiintengiso, ezininzi iimpawu zifuna ubudlelwane bentsingiselo phakathi kwabo kunye nento ebonisiweyo.
Kulo mzekelo sinokubona ukuba i-orenji ithatha indawo ye-soda can, kwaye ithumela umyalezo wendlela yendalo kunye nempilo yesiselo sayo.
Lo ngomnye umzekelo ocacileyo wendlela uphawu oluzama ngayo ukutshintsha ukupakishwa kwayo ngeziqhamo, ukuthumela umyalezo wokuba imveliso yawo yendalo kwaye ikumgangatho ophezulu.
Isosi yaseMelika iTabasco, ngalo mfanekiso kwaye isebenzisa umfanekiso we-metonymy, yenza kucace ukuba isosi yayo yibhombu.
UFanta uzenza zicace iinjongo zakhe ngokutshintshela ulwimi lwemodeli afake iqunube elibomvu nelejusi, apho asithumelela umyalezo wokuba incasa yaso yendalo kwaye inamandla.
Okokugqibela, sidibana neli phulo leCoca Cola apho libonisa isiselo sayo esithambileyo esinencasa yelamuni. Kulo mfanekiso, i-metonymy ifumaneka kumxholo, kule meko i-lemon peel ukuvakalisa isitya esiya kuba yincasa yesiselo.
Ezinye izafobe ezibalulekileyo kuyilo
I-rhetoric ebonwayo yenziwe ngezafobe ezahlukeneyo zentetho. kwaye ke siza kukhankanya ezine zezona zisetyenziswa kakhulu kwicandelo lentengiso kunye noyilo, ngaphandle kwe-metonymy ebonakalayo ehlalutywe ngaphambili.
Isafobe esibonwayo siqondwa njenge uthelekiso phakathi kwezinto ezimbini ezibonakalayo. Imifanekiso efaniswa kwizafobe akunyanzelekanga ukuba inxulumane enye kwenye, nokuba iyafana.
Omnye wabaqulunqi abaziwayo bokusetyenziswa kwalo mzobo nguChema Madoz.
Ingongoma yesifaniso yile yenza ukufana okubonakalayo phakathi kwezinto ezahlukeneyo, ukuba umzekeliso unzima kakhulu okanye unyanzelekile, uluntu aluyi kuyiqonda.
Ibaxo elibonakalayo okanye yintoni efanayo ubaxo olubonakalayo ukuze kuqaqambise inkalo okanye uphawu yemveliso okanye inkonzo enikezelwayo.
Isifaniso esibonwayo sisetyenziselwa uku yenza uqhagamshelwano phakathi kwento ethile kunye nemveliso, ukuze umbukeli anxulumanise olo phawu nemveliso ethethiweyo. Umzekelo, ukusebenzisa imibala eluhlaza kunye nemifanekiso yendalo ukuseka ubudlelwane phakathi kwemveliso yakho kunye nendalo.
I-rhetoric ebonakalayo, njengoko sibonile, isetyenziswa ngokuqhelekileyo kwihlabathi leentengiso kunye noyilo. Yenye ye ezona zixhobo zibalulekileyo, ukunxibelelana kunye nokwakha imiyalezo ebonwayo ngendlela eyiyo ukuphosa kumbukeli.
Ndiyathemba ukuba eli nqaku libe luncedo kuwe ukuba uqonde ngcono i-metonymy ebonakalayo, kunye nento eyingqongileyo. Ukuba unemibuzo okanye iingcebiso zokuphucula inqaku, ungalishiya kwibhokisi yezimvo oya kuyifumana ekupheleni kweli nqaku. Sibonane kwisithuba esilandelayo seCreativos Online.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yintoni i-visual metonymy?
Yeyiphi eyona nkqubo ilungileyo yokuhlela ividiyo?
Imbali yelogo yakwa Kia